Kulan horudhac u ah hagidda iyo horumarinta dhallinta oo ka furmay Garowe. – Radio Daljir
Kulan horudhac u ah hagidda iyo horumarinta dhallinta oo ka furmay Garowe.
Janaayo 12, 2012 12:00 b 0
Garowe, Jan 12 – Kulan lagu joon-gaynayo hagidda iyo hanuuninta dhallinta deegaannada Puntland ayaa maanta ka furmay magaalada Garowe xarunta maamulka Puntland taasoo ay ka qaybgaleen madax sarsare oo ka tirsan dawladda Puntland.
Kulankaan oo ah midkii ugu horreeyey ee noociisa ah oo loo qabto dhallinta Puntland ayaa waxaa ka qaybgalay dhallinyaro ka kala timid gobollada kala duwan ee Puntland, si ay iskugu tusaaleeyaan meelaynta mastaqbalkooda, iyadoo madaxda dawladduna ay so bandhigayso wadiiqo lagu hagi karo jiilka soo koraya si aan loo marin-habaabin.
Isku-keenkaasi dhallimeed oo lagu ifinayo wadiiqada toosan ee jiilka mustaqbalka ayaa furitaankiisa maanta waxaa goob-joog ka ahaa m/weyne ku-xigeen dawladda Puntland Gen. Cabdisamad Cali Shire, guddoomiyaha baarlamaanka Cabdirashiid Maxamed Xirsi iyo xubno kale oo ka kala tirsan golayaasha dawladeed ee Puntland.
Madaxwayne kuxigeenka dowladda Puntland Gen Cabdisamad Cali Shir ayaa ugu horayntii kulanka ka sheegay dhalintu inay lafdhabar u tahay bulshada islamar ahaanaataana loo baahanyahay in kor loo qaado horumarinta,waxaana uu dhanka hay’adaha QM uu ka codsaday inay gacan ka gaystaan in shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada.
Madwxayne kuxigeenka Gen.Cabdisamad Cali Shir ayaa hoosta ka xariiqay in shacabka iyo dowladda Puntland looga baahanyahay inay siwadajir ah uga hortagaan qofkasta oo qalqal galinaya amaanka Puntland.
Wasiirka shaqada,shaqaalaha ciyaaraha iyo dhalinyarada Puntland Cabdiwali Xirsi Indha-guran Guran oo isguna ka hadlay kulanka ayaa ka codsaday dhalinyarada inay bartaan xirfada farsamada gacanta ayna sameeyaan wax soo saar dalka gudihiisa ah.
Gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi oo ka hadlay kulanka ayaa waxaa uu ku booriyay dhalinyarada inay ka hortagto cadawga kusoo duulay oo uu ku tilmaamay inay ka mid tahay ururka Al-Shabaab.
“Cadawga waxaa ay laayeen isimadayna,saraakiisheyna,culimadayna waxaan inoo balan ah inaan siwadajir ah uga hortagno,dhalinyaradana gacayn haka gaysato sidii la isaga qaban lahaa”ayuu yiri gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi.
Kulanka ayaa kusoo beegmaya xilli dowladda Puntland ay dagaal xoogan kula jirto kooxda Al-Shabaab oo la rumaysanyahay dhalinyarada inay u adeegsadaan ka qaybqaadashada falalka amni daro ee kadhacaya Puntland.
Shan qof oo burcadbadeed Soomaaliyeed ah oo ku dhaawacmay weerar iska caabin ah oo ay saameeyeen ciidamada badda Midowga Yurub
7 qof oo rayad ah oo siyaabo kale duwan loogu dhaawacay degmada Taleex ee gobolka Sool.